China kwagcizelela Kushintshwe Polyvinyl chloride (MPVC-SR) Non-embiwa Ukuxhumana Pipe ifektri abakhiqizi | UShengyang
Ipayipi Lokuxhumana Elingelona Lokumba Eligcizelelwe
◎ I-PVC eqinisiwe eguquliwe (MPVC-SR) engeyona yokwemba ipayipi lokuxhumana elizinikele lokungcwatshwa
Njengamanje, kumaphrojekthi wokuxhumana ongewona owokumbiwa, amapayipi e-PE namapayipi ayisisekelo we-silicon asetshenziswa kakhulu. Isizukulwane esisha sepayipi elizinikele ekumbeni elizinikele i-MPVC-SR elenziwe yinkampani yethu liphakeme kunepayipi le-PE ne-silicon core pipe ngokuya ngokusebenza, indlela yokuxhuma, izindleko zokuthenga kanye nokuhamba.
◎ Ukumelana okuhle kakhulu kumthelela wokushisa ophansi
Ishubhu lafakwa efrijini le-15C, futhi ukuhlolwa komthelela kwenziwa ngemuva kokubanda kwe-1H ngaphandle kokuqhekeka. Ukuxhumeka okulula nokunamandla kakhulu kuthatha ukuxhumeka okukhethekile kwe-glue, okulula ukuyixhuma, futhi amandla wokuxhumeka aphezulu kunamandla wepayipi uqobo.
◎ I-Flame retardant, ukuvikelwa kwemvelo, ukumelana nokuzamazama komhlaba
Ipayipi le-MPVC-SR liyamelana namalangabi futhi liyazicisha, futhi ukusebenza kwalo okubasayo kwelangabi kudlula izinga le-V0, elilungele ukuphepha komlilo. Izinto zokusetshenziswa zingokuhlanzeka kanye nezinto zemvelo ze-polymer nezithasiselo. Ipayipi lingena enhlabathini futhi alinakho ukungcoliswa kwemvelo nomhlabathi. Ipayipi lingcwatshwe ekujuleni kwezinxenye ezine-ezinhlanu zobubanzi obungaphandle bepayipi, kuthi ingxenye eyodwa yesihlanu yobubanzi bepayipi ivezwe ngaphandle.
◎ Ukugqwala nokumelana nokuguga
Izinto zokusetshenziswa zepayipi le-MPVC-SR ikakhulukazi i-calcium carbide, ezinze ngentengo futhi ephansi ngezindleko; i-coefficient yayo yokungqubuzana ingu-0.25-0.35, udonga lwangaphakathi lubushelelezi, ukumelana nokudonsa kuncane, futhi ukuphuma kokuzungeza kungaphansi kuka-1-3%. Ukusebenza kwezindleko kungcono kakhulu kunepayipi le-HDPE nepayipi eliyinhloko le-silicon.
Ukwakhiwa okuphezulu futhi okulula nokunakekelwa
Ipayipi le-MPVC-SR lihlangabezana nezidingo zezimo ezikhethekile futhi lilungele izindawo zokwakha ezinezindonga, izindlu nezinye izakhiwo, ezingaxhunywa ngenkathi kudonswa. Futhi akukho ukunikezwa kwamandla okudingekayo ukuxhumeka noma ukugcinwa, futhi amasokhethi akhethekile we-glue angasetshenziswa ngqo ukuxhumeka ekamelweni lokushisa, eliguquguqukayo futhi elilula.